izihlahla Pine ezikhulayo eSiberia, bayahlonishwa ngenxa yobuhle balo, ukusitha imfihlakalo ezithile futhi ulethe izinzuzo ezinkulu abantu. Kusukela ezikhathini zasendulo, umsedari anamandla kubhekwa umthandazi futhi umhlinzeki ngenxa yokuba khona izinto zokwelapha eziqukethwe nati, amagxolo, inhlaka zikaphayini izinaliti kanye Izigaxa. Zonke izingxenye izitshalo bayakwazi ukuba aphulukise abantu ababeguliswa izifo ezingathi sína. Ngokungangabazeki, uphayini laseSiberia iyona yokuziqhenya futhi ukujula ezweni lethu elikhulu.
Abantu bakubize ngokuthi "isihlahla ezithandwayo zezingoma" futhi "lowo mdondoshiya laseSiberia" - inkosi kwamahlathi esinamandla sikhathi samanje inikeza labantu nge kwemikhiqizo zokwelapha. Ngokwesibonelo, uphayini izinaliti yakhiwa iqoqo amavithamini, namafutha ezitshalweni ezisanhlamvu ukwelapha izifo ezehlukene. Futhi niyazi ukuthi izakhiwo esiyingqayizivele ocebile zikaphayini Izigaxa? Ngo Folk imithi yakhe ukulungiselela ephulukisa izidakamizwa ezisiza ukuba babhekane izifo ngezifo.
Ngokuvamile, Izigaxa angavuthiwe bathathwa infusions kanye Iziphungo. Ezinsukwini ubudala ijusi efihlekile abasha babephathwa ukhwekhwe. okuphakelayo Oku is kahle wayixova esigqulweni ekhethekile bese ungeze ku ingxube ochotshoziwe uju kanye isithombo ogayiwe. Ukuze ekwelapheni amanxeba kanye ukusha usebenzisa juice okumsulwa, wabizwa ngokuthi namafutha ngokuyisimangaliso. Young zikaphayini Izigaxa dambisa sifo. Ukuze wenze lokhu, kwathiwa ziyacolwa ocindezelwe lo whey.
lwezici zalo ezimangazayo ku ugologo abadumile yemisedari Izigaxa, imazisa ukusebenzisa ngisho nabantu izifo ezithathelwana ngobulili. Abelaphi bendabuko futhi abathakathi odokotela Kunconywa ukubeka amahlumela ngesikele sokuthena ambalwa yemisedari ekhaya emoyeni ukugcwaliswa. Njengoba yaziwa, nemisedari ahlanganiswe-mpilo fitontsidami. It is wafakazela ukuthi amakhowe futhi amajikijolo ezikhula eduze lezi zitshalo, unothile ngamavithamini.
Ukwelashwa zikaphayini Izigaxa oboniswa kwabantu abaye bahlupheka unhlangothi. Kujwayeleke cerebral ukugeleza kwegazi kuzosiza tincture. ibuye Kunconywa ukuba isetshenziswe njengoba isilinganiso izifo ukuze wonke umuntu oyikhathalelayo impilo yabo. Recipe ngalinye etholakalayo: Ukuqoqa Izigaxa ezinhlanu ehlobo, zigezisise ngamanzi abilayo, bese uthathe yizicucu amancane, nigcwalise inkomishi 70% utshwala (vodka etholakalayo).
ikhava Liquid futhi ushiye sokunika amasonto ama-2. umthamo wansuku zonke we tincture ayonyakaziswa. Ingxube ekwakhiweni esithathwayo ngemva kokudla ekuseni phezu spoon dessert.
Indlela yesibili labo contraindicated utshwala isithako nomuthi: udinga zikaphayini Izigaxa in inani izingcezu ezinhlanu, futhi 500 amagremu yamanzi. Sabeka izinto zokusetshenziswa phezu komlilo kanye thumba for 5-10 imizuzu. Umhluzi ezithathwe emuva 50 ml ibhulakufesi. Ukwelashwa nokuvikelwa umhluzi ezinjalo - okungenani izinyanga 6.
Isixazululo of Isigaxa kuhle kakhulu somoya bronchial kanye ukuvuvukala yamaphaphu. Ukuze ekuwulungiseleleni Udinga olunye umsedari Isigaxa kungathatha nati, namanzi (0.5 L). Lolu ketshezi kulethwa abilayo futhi ubilise imizuzu 20. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukugcizelela amahora 5 embizeni avaliwe futhi uhlobo. Daily washisa 100 ml (ngemva kokudla) izikhathi ezingu-5 ngosuku. Umhluzi zingase zihlanzwe enxebeni ezindaweni inkinga esikhumbeni.
Isithako nomuthi asetshenziselwa yezifo engenhla ipheshana zokuphefumula, stomatitis, isifo periodontal, nabo aphathe adenomas, izinhlumba, izimila kanye induna. Izigaxa, omisiwe kuhhavini, isetshenziswa njengophawu masseur. Yako yangaphambi evuthayo, le ndwangu ke eligoqiwe esikhwameni bese ziwela phezu kwawo. Lokhu nokokuyifaka prickly kahle ephumula emuva imisipha, aqede ubuhlungu futhi ikhuthaza.
Izindlela Traditional yokwelashwa hemorrhoid: kanjani ukubhekana nalesi sifo
Moscow History Museum: kuphi nokuthi yini ukubukela?
Imiyalo yesicelo se- "Metamax". I-Analogs yezibuyekezo zomuthi nezibuyekezo zabathengi